Tani waxay noqon kartaa hooyada hore ee iPhone XR ee 2019 | Wararka IPhone
Tani waxay noqon kartaa hooyada 'iPhone XR' ee 2019
Diyaar garow, xadka xanta ayaa bilaabeysa in laga gudbo iyo hada laga bilaabo iyo ilaa bisha Sebtembar tan waxaa lagu buuxin doonaa "xatooyo", xan iyo mala awaal. Waxa aan ugu jecelnahay waqtigan ayaa ah in badanaa wax runti ay ku dhammaadaan muujinta iyo markii iPhone uu yimaado Keynote waxaan horeyba u ogaanay ficil ahaan wax walba oo ku saabsan.
Xaaladdan oo kale, silsiladda wax soo saarka ayaa horeyba u muuqata inay socoto waana arki karnaa waxa ay noqon laheyd Motherboard-ka iPhone XR ee sanadkan 2019Muxuu qaybtaan muhiimka ah ee gudahaaga ah nooga sheegi karaa saldhiga? Waa inaan aragnaa.
Sida muuqata shaki kuma jiro in saxanka uu ka imanayo mustaqbalka iPhone XI ama iPhone XR (2019) iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah in saxanka noocyada ugu sarreeya ee Apple ay leeyihiin qaab «L» ah, hase yeeshe, Waxaan sidoo kale tixgelin karnaa suurtagalnimada in isbeddelkani mar kale oo waxaan si wax ku ool ah u wajaheynaa boodhadhka waxa loo maleynayo inuu noqon doono casriga ugu awoodda badan meeraha maya? Si kastaba ha noqotee, gudaha Slashleaks Way iska cadahay qaabka uu Motherboard-kan iska leeyahay, waxaan qiyaasayaa sababta oo ah waxay maareeyaan nooc ka mid ah macluumaadka mudnaanta leh ee aysan rabin inay noo sheegaan.
Iyaga laftoodu waxay dhahaan inkastoo xaqiiqda ah in saxanka mar hore la daabacay oo ay cadahay inay asal ahaan ka duwan tahay iPhone XR hadda, wax kale oo yar ayaa laga ogaan karaa terminaalka daadadkaan. Xaqiiqdii, lama yaabi doonno haddii ay mid kale leedahay, in kasta oo xaqiiqadu ay tahay in dhowr shirkadood ay ku shaqeeyaan sida ugu yar ee wax lagu naqshadeeyo naqshaddooda taarikhdooda sida kuwa ay Apple soo hindisay. Marka laga hadlayo hagaajinta, kororka xusuusta RAM ayaa la filayaa, oo ay ku jiraan 4 GB, dib u soo celinta wireless-ka la beddeli karo iyo wax yar oo dheeraad ah oo loogu talagalay terminaalka buuxinaya rajooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Tani waxay noqon kartaa hooyada 'iPhone XR' ee 2019
New Beta 3 iyo Beta Dadweynaha labaad ee iOS 13 iyo iPadOS hadda waa la heli karaa
Xayeysiiska cusub ee Apple wuxuu diiradda saarayaa aqoonsiga Face-ka iyo "nasasho"